Coronavirus: Jimicsiga Museveni iyo qodobo kale oo la xiriira xayiraadaha Afrika - BBC News Somali
Coronavirus: Jimicsiga Museveni iyo qodobo kale oo la xiriira xayiraadaha Afrika
Iyadoo dadka ku nool qaybo ka tirsan dunida ay la qabsanayaan bandowga iyo xaaladaha nolosha ee ka dhashay xanuunka coronavirus, ayaa waxaanu halkan idinkugu soo gudbin doonnaa lix dhacdo oo la isla dhex marayo oo xilligan ka dhacay gudaha Afrika.
Siyaasi ku jira da`da 70-meeyada ayaa noqday qofkii ugu da`da weynaa ee ka qeyb qaata muuqaal xujo ah oo aad u shaac baxay, kaas oo soo jiitay dad badan oo ku nool Gambia.
"71-jirka weli wuu xooggan yahay," Ousainou Darboe ayaa sidaasi u sheegay BBC-da, kaddib markii uu dhammeystay ilaa 10 jeer oo jimicsiga ah, balse wuxuu ballan qaaday inuu mustaqbalka gaarsiin doono ilaa 25.
"Waxa uu 25 jir sameyn karo, anigana waan sameyn karaa. Waxaan xujeysanayaa dhammaan hoggaamiyeyaasha inay sidaas oo kale sameeyaan, si hoggaamiyeyaasha Afrika aysan u noqon kuwo fadhiid ah."
Tan iyo toddobaadkii la soo dhaafay, siyaasiyiin iyo dad caan ah oo ku nool Gambia ayaa xujadaas soo furay,waxaana ka mid ah fannaanka caanka ah, Jaliba Kuyateh.
Cumar Wally oo ah weriye u dhashay Gambia ayaa sheega in dad kala duwan ay ka qeyb qaadanayaan xujadaas oo ay ku dheehan tahay farriin qalbiga taabaneysa: "Ku negow guriga, joojina faafitaanka coronavirus."
Waxay dhiirri-gelin u noqon kartaa madaxweynaha 75 jirka ah ee Uganda, kaas oo Khamiistii iska soo duubay muuqaalka - maalin kaddib markii uu mamnuucay in bannaanka jimicsi lagu sameeyo.
Yoweri Museveni ayaa si xiriir ah u sameeyay 21 jimicsiga xabadka ah, wuxuuna ugu baaqay dadka inay sidaas oo kale ku sameeyay guryahooda.
Hooyada ugubka ah ee aan weli la kulmin cunuggeeda
Xigashada Sawirka, Yaneu Ngaha Bondja Junie
Dhakhaatiirta ayaa dhalaankan fogeeyay markii ay dhalaatay si aysan hooyadeed uga qaadin Corona
Hooyo 19 jir ah oo qabtay fayraska Corona, taas oo toddobaadkan ku umushay xarun karantiil oo ku taalla dalka Cameroon ayaa sheegtay inaysan weli arkin gabadheeda.
Dhaqaatiirta ayaa BBC-da u xaqiijiyay in ilmaha yar ay geeyeen meel lagu daryeelo si uusan fayraska ugu dhicin.
Marie Youri oo ah hooyo ugub ah ayaa sheegtay in shaqaalaha caafimaadka ay niyadda u dejiyeen: "Kelinimo ayaan dareemay. Aad baan runtii u yaabay waana oynayay. Dhaqaatiirta ayaa i caawiyay, waxay ii sheegeen inay wax walba hagaagi doonaan."
Hooyada iyo cunuggeeda ayaa la sheegay inay haatan wanaagsan yihiin ayna ku jiraan qeybo kala duwan oo ka tirsan isbitaal ku yaalla caasimadda dalkaas, ee Yaoundé.
Gabadha yar oo lagu magacaabo Foraya ayaa dhalatay iyadoo miisaankeedu uu yahay 2.1kg (4.6lb) kamana aysan muuqan calaamadaha fayraska. Ms Youri ayaa haatan la daweynayaa oo qaadaneysa hawada oxygen-ka, waxaa mar kale coronavirus laga baari doonaa 10 maalmood gudahood.
Kemme Kemme Marileine, oo ka mid ah dhaqaatiirta ka umuliyay ilmaha, ayaa sheegtay inay aad uga murugootay kiiskan gaarka ah.
"Waxaan ka fekerayay gabadhaas yar... ee lahayd uurkeedii ugu horreeyay, waxaana is lahaa: 'Waxaan doonayaa in cunuggan uu noolaado.'"
Yaneu Ngaha Bondja Junie, oo ay isla shaqeeyaan Kemme, kuna takhasustay cudurrada haweenka ayaa ugu baaqday hooyooyinka uurka leh ee qaba fayraska inaysan walwalin.
Qalabka gacmaha lagu dhaqdo
Qalab gacmaha lagu dhaqdo oo ay sameeyeen arday dhigata jaamacad ku taalla Uganda ayaa lagu wadaa in la dhigo dhammaan xarumaha jaamacadda.
Qalabkan oo cadceedda ku shaqeeya isla markaana aan u baahneyn inuu qofku gacmihiisa ku taabto ayaa waxaa soo saariddiisa ku baxday $24 (£19.50) waxaana loogu talo galay dadka saboolka ah.
"Qalabkan waxaa la dhex gelin karaa caag walba oo biyaha lagu shubo, jirgaan ama fuusto, sida uu qofku u awoodo," ayuu BBC-da u sheegay Umar Yahya oo ah bare ka tirsan jaamacadda.
Waxaa qalabkaasi sameeyay arday baarayaal ah oo lagu kala magacaabo Lucky Mwaka iyo Mansoor Muhammad, isla markaana dhigta Jaamacadda Islaamiga ah ee Uganda.
Qorshaha ardaydan ayaa ahaa inay isticmaalaan tiknolojiyadda, si loo yareeyo taabashada meelaha laga yaabo inuu fayrasku gaaray.
Ardada waxa ay doonayeen hanaan nadaafad leh misana raqiis ah
"Haddii aad ku sugan tahay meelaha ay biyuhu ku yar yihiin, waxaad isticmaaleysaa inta aad u baahan tahay inaad gacmaha ku dhaqato," ayuu yiri Mr Mwaka.
Boonbalo badelay martidii arooska
Aroos ka dhacay dalka Koofur Afrika ayaa waxaa la keenay labo boonbalo oo beddelay martidii ka qeyb geli lahayd arooska, maaddaama dalkaasi laga joojiyay isu imaatinnada bulshada sababo la xiriira xanuunka coronavirus.
Xigashada Sawirka, Dan Mace
Dan Mace ma uusan rabin in bandowga uu baajiya arooskiisa
Isu imaatinnada bulshada ayaa laga joojiyay dalkaas, waxaase la oggol yahay dhaqdhaqaaqyada muhiimka ah, waxaa sidoo kale la mamnuucay iibka aalkolada iyo sigaarka.
Xaqiiqdii, toddobaadkii la soo dhaafay lammaane ku nool Koofur Afrika ayaa la xiray kaddib markii iyaga iyo martidooda ay xaflad sameysteen.
Balse Dan Mace oo filimaanta duuba ma uusan dooneyn inuu niyad jebiyo gacalisadiisa Gabrielle Esterhuizen, sidaas darteed wuxuu kaga farxiyay xaflad uu ugu dhex sameeyay gudaha beertooda oo ku taalla Cape Town.
Muuqaal uu ka soo duubay xafladdooda ayuu ku soo wadaagay baraha bulshada, taas oo uu xiriirinayay saaxiibkood oo ku sugan Mareykanka kaas oo ka soo wacay muuqaal,
Basas bilaash ah, biyo iyo koronto
Korontada iyo biyaha ayaa laga dhigay bilaash dalka Guinea, oo sidoo kale dhammaan gaadiidka dadweynaha haatan lagu raaco si bilaash ah.
Ra`iisul Wasaare Ibrahima Kassory Fofana ayaa arrintaas ku dhawaaqay toddobaadkan, waxayna socon doontaa muddo saddex bilood ah, iyadoo ay dalkaasi uga baxday lacag dhan $264m (£212m)
Wuxuu sheegay in tallaabooyinkaas ay qeyb ka yihiin dadaallada uu dalkaasi ugu jiro wax ka qabashada xasaradda caafimaad ee dalkaasi, oo laga yaabo inay saameyn ku yeelato dhaqaalaha iyo nolosha bulshada.
Tallaabooyinkan ayaa yimid iyadoo dalka ay ka jirta xasilooni darro
Tallaabooyinkan ayaa ku soo aaday xilli xasilooni-darro siyaasadeed ay dalkaasi ka taagan tahay, taas oo la xiriirta dastuurka cusub. Waxay sidoo kale imaaneysaa keliya afar sano kahor markii ay dalkaasi ka jirtay xasaradda cudurka Ebola.
Qiimaha dawooyinka iyo dhammaan waxyaabaha aasaasiga ah ayaa la yareeyay ilaa bisha June, sidoo kale waxaa meesha laga saaray canshuurta laga qaadi jiray hoteellada iyo ganacsiyada dalxiiska la xiriira.
Waxaa sidoo kale la yareeyay qiimaha kirada guryaha, ilaa bisha December.
Siyaasiga mucaaradka ah Faya Millimono ayaa sheegay inay tahay dowladda ay sidoo kale tixgeliso yareynta qiimaha shidaalka.
Saddex iyo toban gabyaa ah oo ku kala sugan qaaradda ayaa iska soo duubay muuqaal iyagoo akhrinaya qeyb ka mid ah gabayga, waa gabay uu sanadkii 1962 tiriyay qoraa u dhashay Nigeria laguna magacaabo Christopher Okigbo.
Muuqaallada gabayga round-robin ayaa haatan la isugu geeyay hal muuqaal.
Lola Shoneyin oo ah qoraa iyo gabyaa u dhalatay Nigeria, taas oo mashruuca bilowday, ayaa haatan waxay ku guda jirtaa inay barto da`yarta akhristayaasha iyo qoraayada ah gabayadii cajiibka ahaa ee ay qaaraddu lahayd.
Waxay BBC-da u sheegtay in sababta ay gabaygaas u dooratay ay tahay dareenka nuglaansho ee uu xambaarsan yahay.
"Dad badan ayaa dareemaya nugeyl sababo la xiriira Covid-19 oo ah mid aan kala sooc lahay. Dadka ayaa dareemaya jileec iyo nuglaansho.
"Waxaan u maleynayaa in gabayga Okigbo, uu si wacan uga hadlayo xaaladda.
"Waxaan jeclaan lahaa inaan arko da` yar badan oo akhrinaya Okigbo. Rajo ayay sidoo kale ka heli doonaan halkaas."
Abwaannada ka qeyb qaatay mashruucaas waxay kala yihiin Wana Udobang, Logan February, Lebo Mashile, Titi Sonuga, Lemn Sisay, TJ Dema, Nii Ayikwei Parkes, Clifton Gachagua, Nick Makoha, Efe Paul Azino, Kayo Chigonyi, Kola Tubosun iyo Natalia Molebatsi.
Coronavirus: '"Coronavirus waa siyaasad ee ma ahan dhibaato caafimaad"
11 Abriil 2020